Kaominina mifandraika amin'ny Fifandraisana sy ny Ghosts
Vokatra amin'ny valin'ny 14 hita
George Hopkins maty, tsy fantany ve maty izy izao, ho voaray tsara any an-danitra noho ny fianakaviana, Dog sy ny sakafo, izay Mankafy ny Company-tsoavaly sy ny biby fiompy
Alf Pritchett's Experience of Death in WW I and of the Afterlife or Heaven: Kaonty voalohany amin'ny alàlan'ny Direct Mediumship an'i Leslie Flint
Mifandraisa amin'ny maty na fanahy, fifandraisana ara-panahy, fanelanelanana ary fanandramana aorian'ny fiainana any an-dafy Gary E. Schwartz
Fifandimbiasan'ny instrumental transcommunication (ITC), Feo mifono feo elektronika (EPP), horonam-peo, vatana vaovao, tontolon'ny tontolon'ny fanahy: Fahatakarana ny lanitra sy ny helo. Ny hasarobidin'ny fivavahana
Ny fifandraisana an-tserasera dia mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy ary manomboka amin'ny alalan'ny fitaovana toy ny telefaona sy televiziona ny olona. Ny fifandraisana toy izany dia nahatonga ny saina amin'ny tontolo ara-panahy mifanaraka amin'ny hevitra toy ny lanitra sy ny helo. Manana tanjona lehibe ny fivavahana mba hanomezana tari-dalana ara-môraly mba hanampiana ireo olona hiakatra any amin'ny ambaratonga ambony ara-panahy. Ny porofon'ny fiverenana indray ao amin'ny vatana dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka manova finoana avy amin'ny androm-piainana iray hafa, izay hanampy amin'ny fanafoanana ny fisarahana eo amin'ny olona samy hafa finoana ary hanampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa.
Matoatoa na ny fanahy Sary & Reincarnation: Manome ny fanahy ny Template fa endrika ivelany Fitaomana
Ny Trooper State of Minnesota dia naka sary tao anatina toeram-pialan-tsasatra nahafatesana olona iray izay nampisongadina tampoka ny sarin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko teo ambonin'ny sehatra tamin'ny endrika fanehoana feno endrika, izay tsy ho voatazona amin'ny fahafatesana. Ny endriky ny endrika tarehy dia mitovy amin'ny endriky ny tarehin'ilay zazalahy maty. Ity fanamarihana ity dia manohana fa misy ny tempolin'ny angovo izay fototry ny fisehoana ara-batana amin'ny toe-java-niseho ao amin'ny vatana.